Fifampitifirana nivaivay tao Toamasina: jiolahy efatra lavo, rotiky ny balan’ny FIP sy ny USI | NewsMada
Ireo mpitandro filaminana avy ao amin’ny FIP ao Toamasina, miampy ny polisin’ny USI avy aty Antananarivo mihitsy, omaly tolakandro, no indray nifarimbona tamin’ny “opération” nisamborana ity andian-jiolahy mahery vaika iray tao Toamasina ity. Efatra tamin’ireo jiolahy no lavon’ ny balan’ny polisy nandritra ny fifampitifirana.
Toy ireny amin’ny horonantsarimihetsika ireny ! Nirefodrefotra tsy nifandrenesana indray ny poa-basy tao Toamasina, omaly tamin’ny 4 ora tolakandro. Jiolahy miisa efatra indray lavon’ny polisin’ny USI sy ny Fip nandritra ny fifandonana, tafaporitsaka kosa ireo namany telo mianadahy. Raha ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny polisy, tao amin’ny fokontany Beril Rose tao ambadiky ny trano fisakafoana lehibe iray no nifanehatra tamin’ny polisy ireo jiolahy ireo. Tsy vita teo anefa izany fa nihazo tao Tanambao faharoa Bazarikely sy 4 chemins Morarano sy Ambolomadinika indray ny fifanenjehana narahina fifampitifirana teo amin’ny jiolahy sy ny polisy. Vokany, lavon’ny balan’ny polisin’ny USI Antananarivo notarihin’ny kaomisera Rakotonjanahary Mick Antonio sy ny FIP Toamasina notarihin’ny kaomisera Rafaliarivo Jules.
Jiolahy telo no efa fantatra fa hanafika…
Andro vitsy mialoha izao no efa nahazo loharanom-baovao ny polisy fa misy andian-jiolahy miisa fito ahitana vehivavy iray mikasa hanao fanafihana eo amin’io toerana io. Niatrana teny an-toerana ireo polisy nanao fanamiana sivily niaraka tamin’ireo nanao fanamiana polisy. Voamarina tokoa ny fisian’ireo jiolahy nandeha Bajaj (vao avy nangalarina hanaovana ilay fanafihana), nikasa hanafika mpandraharaha jirofo. Nasaina nijanona ireo jiolahy nandeha Bajaj, saingy tifitra avy hatrany no nasetrin’izy ireo ka raikitra teo ny fifamaliana tifitra. Marihina fa nitrangana fanafihana mitam-piadiana roa tao anatin’ny herinandro. Voalohany tao Tanambao fahadimy, raim-pianakaviana iray nandeha moto nitondra vola 10 tapitrisa Ar norobain’ny jiolahy. Ny zoma sy asabotsy kosa tao Valpinson, raim-pianakaviana iray nandeha Bajaj no notafihin’ny jiolahy, lasan’izy ireo ny vola 12 tapitrisa Ar.